Halkaan Ka Aqriso Qeybta ugu xiisaha badan Wareysi uu Madaxweyne Farmaajo siiyay Wargeyska Sharq Al Awsad. | YoobsanNews.com
Su’aasha #7aad:-Nooga Sheekee Taariikh Nololeedkaada iyo Bilowgii Noloshaada?
Jawaabta #7aad:- Magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo , waxaan ku dhashay Muqdisho Sanadkii 1955 gaar ahaan Xaafadda Iskuraran oo ku taallay halka hadda loo yaqaanno “ Beerta Nabadda”.
Aabahey waxa uu yimid Caasimadda xilligii Gumeystaha Talyaaniga, waxaan wax ku bartay Soomaaliya iyo Maraykanka, waxaan ka qalin jabiyay Jaamacadda Baafolo ee Magaalada New-York .
Waxaan Soomaaliya Ra’iisul Wasaare ka ahaa 2010-2011, waxaana Madaxweyne la ii doortay 8 February ee sanadkaan.
Su’aasha #8aad:- Sidee isku barateen Xaaskaada , Kadibna aad isku guursateen?
Jawaabta #8aad:- Waxaan ku bartay Xaaskeyga Seynab Macallin Magaalada Muqdisho, Daris ayaan ahayn, Gurigooda iyo Gurigeyga ayaa isku dhawaa.
Mar kale ayaan ku kulanay Maraykanka xilligii aan ahaa Shaqaale ka tirsanaa Safaaradda Soomaaliya ee Washington , iyadoo halkaas u soo qaxday, waxaana is guursanay 1992, waxaan iminka leenahay 4 Caruur ah , 2 wiil iyo 2 Gabar.
Su’aasha #9aad:- siduu kuugu baxay Magaca Farmaajo?
Jawaabta #9aad:- Farmaajo waa naaneystii Aabaheey, waa wax la cuno oo Luqadda Talyaaniga loogu yaqaanno Farmaajo, waxaana ay ku timid Neenaastani sheeko taas oo ahayd in Ciidamada Gumeystihii Talyaaniga ee dalka maamulayay 50meeyadii ay xireen Aabahey iyo tiro kale oo dhalinyaro ahaa kuwaas oo ka soo horjeeday Isticmaarka islamarkaana Madax banaani doon ahaa.
Cuntada laga cuno Xabsigaasi waxaa ka mid ahaa Farmaajo, iyadoona marka laga reebo Aabaheey intii kale ee la xirneed oo tiro ahaan gaarayay 11 Dhalinyaro ay diideen in ay cunaan Farmaajada.
Aabahey inta aan lagu xirin Xabsigasi Talyaaniga ayuu yaqaanay Farmaajada waana cuni jiray maadaama uu aad u jeclaa.
Sidaas daraadeed maadaama Aabaheey kaligiis uu cunay Farmaajada ayaa saaxiibadiisii ugu Magac dareen, sidaasna ay ugu baxday farmaajo.
Waxaana qoyskeena ay caan ku noqdeen markii dambe Neeneestaas.
Su’aasha #10aad:- Sidee Waqtigaada ugu qeybisaa Reerkaada iyo howshaada Madaxweyne? Mase jirtaa Hiwaayado aad jeceshahay in aad sameyso?
Jawaabta #10aad “ Shaqadeyda Xafiiska ayaa inta badan qaata waqtigeyga haatan, Caruurteyda weli waxa ay ku nool yihiin Maraykanka, waxaa booqasho noogu timid mid ka mid ah Gabdhaheyga maalmahaan, waxayna noola joogee si kumeel gaar ah, run ahaantii Shaqada Madaxweyne ma kuu saamaxeyso wax kale marka laga soo tago nolosha Reerka IWM.
Waxaan xiiseyn jiray Aqriska Iyo Sport-ga, inta aan Madaxweynaha noqon waxaan taageeri jiray Kooxda Kubadda Cagta ee Real Madrid, waana la socon jiray Ciyaaraheeda laakiin taas waa dhamaatay hadda.”
Su’aasha #11aad:- Mushaarkaada markii aad joogtay Maraykanka Sanadkii waxa uu gaarayay 84 kun oo dollar, hadda waa imisa marka aad noqotay Madaxweynaha Soomaaliya?
Jawaabta #11aad:- Ma qaadan Mushaar tan iyo markii la idoortay illaa iyo hadda , Dowladda ayaa ii qondeyn doonto Mushaarkeyga Madaxweyne, laakiin ma garanayo Xaddiga uu la egyahay, maxaa yeelay Miisaaniyadda dowladda weli lama ansixin.
Madaxweynaha Soomaaliya ma meel marsan karo Mushaar inta uu doono laakiin waxaan sugaa waxa la iiga go’aamiyo Misaaniyadda Dowladda.
Su’aasha #12aad: Waa side xiriirka aad laleedahay Madaxweynayaashii kaaga horreeyay Xilkaan?.
Jawaabta #12aad:- Xiriir fiican ayaan laleeyahay Madaxweynihii iga horreeyay ee Xasan Sheikh Maxamud waxaan ku booqday Gurigiisa intii aan ku guda jiray Booqashadii aan ku aaday Turkey halkaas oo uu degan yahay sidaasoo kale xiriirka igala dhexeeyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed waa mid wanaagsan , Telfoonka ayaan marba marka ka dambeysa ku wada xiriirnaa, waana dhageystaa Talooyinkooda, waxaa xusid mudan maalintii la I dooranayay Sawirkii 3deenna oo Wadajir ah nalaga qaaday taasi waxay ku tusineysay inagoo wada tartanay hadana in si nabad aan hoggaanka ugu kala wareegnay.
Su’aasha #13aad:- Ma maqashaa Qaraxyada ka dhaca Caasimadda? Maxaase dareentaa marka aad Maqasho Qaraxyadaas?
Jawaabta #13aad “ waan maqlaa mararka qaar, waxaana dareemaa walaac xoogan oo ku aadan Muwaadiniinta ay saameynayaan falalkaas Argagixisanimo , iyo Masuuliyadda iga saaran, aniga waxaan leeyahay Caruur, waana dareemaa sida ay noqonayaan Aabayaasha iyo Hooyooyinka u soo dira ilmahooda shaqo ama Waxbarasho ee loo soo celiyo iyagoo ku waxyeeloobay Qaraxyada ama ku geeriyooday, waxaan kaloo ka xumahay dhalinyarada iyagoo Janno raadinaya isku Qarxinaya Eheladooda, halka hoggaamiyayaashooda ay ku raaxeysanayaan Qolalkooda Xasiloon, halkaas isaga cunayaan nimcada aduunyada islamarkaana ay Caruurta dadka u dirayaan dhimasho”.
Previous: “Waxaa la la’ yahay gaadiid dadka abaarta ugu le’anaya Galmudug biyo lagu gaarsiiyo; Caddaado na waxaa maanta lagu xafladeynayaa boqolaal kun oo dollar”
Next: Xiriirka kubadda cagta Somalia oo Holland ka xulanaya ciyaartooy mateli doona qaranka Somalia